Somaliland ma wax jiraa mise waa sheeko hore oo jiri jirtey?mise waa wax hada ka dib la abuuri karo?
Waad salaamantihiin akhristayaasha
Tan iyo markii ay burburtay Soomalia 1991, waxaa somalia ka samaysmay maamulo aanay adduunweynuhu ictiraafsanayn. Waxaa ka mid ah maamulka Somali-land isku magacaabay oo la aasaasay bishii May 18keedii 1991. Waxa uu ahaa mid ay u ololaynayeen hal qoys oo wax ka dega dhulkii la isku odhan jiray British Somali-land xorriyadda ka hor. Magacaasina waxa uu ahaa magacii jiri jirey 60kii ka hor .
Haddaba waxaa isweydiin mudan Somali-landan aynu maqlayno maanta yaa dhidibada u taagay, Beelaha SSHna maxay ku lahaayeen dhisideedii? Waxaa magacan ku dhawaaqay beelaha dega Gobolada Waqooyi Galbeed iyo Togdheer oo arrinkoodu u eg yahay siyaasad salaq leh oo sabaynaysay hubsiimo la aan ama lugta ku haysa cuqdad ay ka qaadeen Somaalida maamulkeedii ugu danbeeyey. Waxayna adeegsadeen aragti cunsuriyeysan oo aan raad ku lahayn taariikhda deegaankii een hore loo odhan jirey s/l, ta siyaasadeed way qasantay iyo ta soomaliyeedna wa ka fool xumaatay.
Waxa aragtidan ay ku dhaqmayaan ahayd mid ah: " Aniga ayaa soo diyaariyey, matalayana, daawanayana meel kasta oo aan aduunka ka joognana una qaylinayna , Dastuurkana aniga ayaa u c odeeyay aniga oo aan u eegin da'da Teesaraha, isla markaana uu midkaayaba shan jeer ku noqnoqonayo." . Tanina waxa ay ka mid tahay aragtiyaha siyaasadeed ee khaldan ee lagu aasaasay Somali-landan maanta.
Waxaanu ku soo gebagebaynaynaa su'aashan ah: Horta marka ugu horeysa ma jiraa wax labada beelood ee wada dega Waqooyiga Soomaliya ay isla meel dhigeen ka dib burburkii Soomaliweyn? Waa maya.
Talo waxaanu ku soo jeedin lahayn sidan haddii la rabo in la wada hadlo:
1) Waa in wax walba laga soo bilaabaa meel la isla ogol yahay oo macquula, waayo waxyaalo aan la isku raacsanayn ayaa jira sida ku dhawaaqida Somali-land, Calanka, Distoorka, iyo Lacagta. Intuba waa wax dad jibaysani sameeyeen.
2) Waa in la raacaa qaabkii reer Waqooyigu waxa u wada qaybsan jiray, isla markaana la tamadiyaa reer Waqooyinimada ee aan la buunbuunin Somali-landnimada.
3) Waa in warbaahinta laga ilaaliyaa waxyaalaha bulshooyinka dega waqooyiga kala fogaynaya hadday noqon lahayd waxa wargeysyada lagu qoro iwm. Sidoo kale waa in la joojiyaa waxyaalaha dadka soo xasuusinaya dhacdooyinkii murugada lahaa ee ay ka midka yihiin diyaaradda taallada laga taagay ama dad meelo lagu sawiro(Waa taallo hargeysa laga dhisay oo lagu xasuusanayo diyaaradihii Hargeysa lagu weeraray iyo niman ka mid ah SNM sawiradoodii). Sababtoo ah dadka degaanka ssh kala meydaan tashan hawshaad kula jirteen xukumadii markaa jirtey iyaguba mucaarad badan bay lahaayeen lamaydaan midoobin mucaaradkoodii sidaa darteed may ahayn wax loo wada dhan yahay.
4) Qodobada kor ku qoran waa in la meelmariyaa ka hor inta aan la isku soo hor fadhiisan wax kasta oo kale, waayo arrimahani waa waxyaalaha caqabadda ku ah inay si fiican isu dhexgalaan labada beelood ee degaan wadaaga.
5)waa in wixii ku kala maqan sida dhulka la isu sheeganayo la isu cesho. wixii ka danbeeyey burburkii.
Intaas oo arimood waa xaqaaiqa ka jira meesha loogu yeedhi jirey somali land 60 kii ka hor. Hadaba cidii danaysaa S/L tii arimahooda waa inay saxaan inta khalad ee ku jira dhulkaa asal ahaan loogu yeedhijirey s/l hadii kale waa inay sidaa ugu jirtaa meel ka lulashada ileen dadku iskuma raacsanee. Axmed
�� Dareenka Shacbiga Somaliland & Duudsiga BBC-da Som